Janaraal Moorgan oo u dhow in uu kamid noqdo xubnaha aqalka sare - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandJanaraal Moorgan oo u dhow in uu kamid noqdo xubnaha aqalka sare
October 18, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Wasiirkii hore ee gaashaandhiga Soomaaliya Janaraal Maxamed Siciid Xirsi. [Sawirka: Archive]
Garoowe-(Puntland Mirror) Wasiirkii hore ee gaashaandhiga Soomaaliya Janaraal Maxamed Siciid Xirsi oo loo yaqaan (Moorgan) ayaa u muuqda in uu noqon doono xubin aqalka sare ah kadib markii mid kamid ahaa nimanka la loolamaya uu ka haray tartanka aqalka sare.
Isaga oo saxaafada kula hadlayay Garoowe, Maxamed Cali Siciid (Guumbe) oo kamid ahaa labada nin ee la tartami lahaa Moorgan ayaa sheegay in uu ka haray u tartamida xubinta aqalka sare.
Guumbe ayaa sheegay in uu uga haray tartanka kadib markii uu la tashi la sameeyay qabiilkiisa, kuwaasoo ka codsaday in uu ka tanaasulo tartanka.
Mahad Cawad Cabdala oo sidoo kale kamid ahaa xubnaha uu madaxweynaha Puntland soo magacaabay oo liiska tartanka kula jiray Janaraal Moorgan ayaa ka tagay tartankaas.
Codaynta murashaxiinta Puntland u matali doona aqalka sare ayaa la filayaa in ay ka dhacdo Garoowe maalinta Khamiista
April 16, 2017 Labo kamid ah burcadbadeeda Soomaaliya oo meydkooda laga helay gobolka Sanaag
Garoowe-(Puntland Mirror) Dowladda Hoose ee Garoowe ayaa bilowday howlgal lagu burburinayo dhismayaal sharci daro ah oo laga dhisay waddooyinka magaalada. Howlgalka oo bilowday dhawaan ayaa lagu burburiyay dhismayaal badan oo ka dhisnaa waddooyinka magaalada. Duqa [...]